HUCHENG Qalabka Alxanka, alxanka alxanka silig, Iskuxirka Adiga iyo Aniga, Alxanka duni midab leh!
silig alxamida ah, xarigga mig, ER70S-6, silig adag, cabirka iyo baakadaha. silig durbaan, faahfaahinta siligga spool
silig alxamida ah, xarigga mig, ER70S-6, silig adag, cabirka iyo baakadaha. siligga durbaanka, faahfaahinta siligga siligga wi fiilooyinka alxanka ee fiilooyinka, fiilooyinka fiilooyinka, ER70S-6, fiilooyinka adag, cabirka iyo baakadaha. fiilooyinka durbaanada, faahfaahinta fiilooyinka spool ...
silig tahriib ah, ER70s-6 cabbirka 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm alaabooyinka alxanka u isticmaalaya Kuuriya
walxaha alxanka la geeyay
waxaa maamula 20-05-25
Gaarsiinta cusub ee Houston USA
waxaa maamula 20-05-18
Tani waa gudbinta cusub ee aan maanta soo dirnay, soosaarayaasha daneynaya annaga ayaa nala soo xiriiri kara waqti kasta.
DIIWAAN GELINTA LAGU SAMEEYO!
waxaa maamula 20-04-28
MIG WIRE, DIIWAAN CUSUB OO KU SAABSAN HOUSTON, KALAGAL!
123Next> >> Bogga 1/3
Alxanka la isticmaalo , ka daadanayo Cored Wire Quudiyaha , ka daadanayo Cored Arc Alxanka Wire ,